Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay wafti ka socda dalka Kenya. – Radio Daljir
Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay wafti ka socda dalka Kenya.
Agoosto 14, 2012 9:06 b 0
Muqdisho, Aug 14 – Ra?iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiwei Maxamed Cali iyo xubno ka tirsan Golihiisa wasiirada ayaa maanta kulan? la qaatay wafti uu hogaaminayo Xooghayaha Joogtada ah ee Wasaarada Arimaha Dibada ee Kenya Thuite Wmangi waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin iskaashiga ka dhexeeya labada wadan.
?Aad ayan ugu faraxsanahay booqashadeena maanta waxaana u nimid inaan dib u howl galino safaaradeena, waxaa kale oo aan rabnaa inaan ka qayb qaadano howlaha soconaya oo ku saabsan sidii dalka loo xasilin lahaa isla markaan u xaqiijino joogitaankeena Muqdisho inuu macno weyn u samaynayo sidii dalka looga hormarin lahaa dhanka Amniga madaama uu dalku dib uga soo kabanayo colaadihii?
Sidoo kale waxa isna meesha ka hadlay wasiirka qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga wuxuuna sheegay in ay ka wada hadleen waftiga sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeyey labada wadan, ?sida hormarinta dhaqaalaha, Waxbarashada, Tababarada shaqaalaha dowladda, Dhinaca canshuuraha, iyo sidii Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya loo siin lahaa tababaro.
Ugu danbayntii ra?iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa uga mahadceliyey dowladda Kenya dadaalka dheeraadka oo ku aadan sidii Soomaaliya loogu soo dabaali lahaa nabad waarta, sidoo kale Ra?iisul wasaaruhu wuxuu soo dhaweyey dib u howlgalinta Safaarada Kenya ee magaalada Muqdisho.